Mashoko Akarurama Uye Ane Umboo | Kuverenga Nekudzidzisa
Mashoko Akarurama Uye Ane Umboo
PFUPISO YECHIDZIDZO: Taura zvinhu zvine umboo hwekuti ndezvechokwadi kuti ubatsire vateereri vako kuti vasare vaine pfungwa yakarurama.
Tsvaga mashoko akarurama. Taura zviri muShoko raMwari, uchiriverenga pese pazvinoita. Kana uchizotaura zvakaongororwa nevesayenzi, kana zvakabuda munhau, kana zvimwe zvinhu zvakaitika, kana humwewo uchapupu, gara waongorora kuti mashoko acho akarurama here uye kuti haana kuzochinja here nekufamba kwenguva.
Usashandisa mashoko zvisiri izvo. Tsanangura magwaro zvisingapesani nenyaya inenge ichitaurwa, nedingindira reBhaibheri, uye nezvakabudiswa ‘nemuranda akatendeka, akangwara.’ (Mat. 24:45) Shandisa mashoko akanyorwa kana akataurwa nemumwe munhu usingapesani nepfungwa yaaitaura uye nechinangwa chake.
Usawedzeredza mashoko kana manhamba. Kana pakataurwa kuti “vamwe vanhu” iwe usazoti “vanhu vese,” kana pakanzi “dzimwe nguva” iwe usazoti “nguva dzese” uye kana pakanzi “zvichida zvakaitika” iwe usabva wati “zvakatoitika.”
Batsira vateereri kuti vafunge uchishandisa uchapupu huripo. Kana waverenga rugwaro kana kuti wataura mashoko evamwe vanhu, bvunza mibvunzo yakakodzera kana kuti ipa muenzaniso wekushanda kwazvo kuti vateereri vaone vega kuti vanofanira kuitei.
Paunenge uchigadzirira kuenda muushumiri, funga nezvemibvunzo yaungangobvunzwa nevanhu, wotsvaga mhinduro dzacho. Kana munhu akakubvunza mubvunzo wausingazivi mhinduro, muudze kuti unoda kumbonotsvaga mhinduro yacho.
Kuverenga Nekudzidzisa—Mashoko Akarurama Uye Ane Umboo